Disaster Relief and Recovery Archives - Brighter Future Myanmar Foundation
On 13 August 2019, representatives from Brighter Future Myanmar Foundation (BFM) visited Thaphyu Kone village in Paung Township, Mon State, wherealandslide occurred on9August following torrential monsoon rains. The death toll resulting from the landslide stands at 72 (as of 13 August) and rescue teams are still searching for missing persons. More...
August 14, 2019August 14, 2019 In Disaster Relief and Recovery
BFM သည် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၁၄)ခုမြောက် လှူဒါန်းမှုအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း (၁,၀၀၀) လှူဒါန်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM)သည်၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ ယနေ့ အထိ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(၁၄)ခုသို့အလှူငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)စီဖြင့် စုစုပေါင်းကျပ် သိန်းပေါင်း(၁၄,၀၀၀)ကို ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM)မှ တာဝန်ရှိသူ ကမ္ဘောဇအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးမိုးဆန်းအောင်ကငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀၀)ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ထံသို့ ယနေ့ (၂၀.၉.၂၀၁၆) တွင်ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (၁၄)ခုသို့ အလှူငွေများ လှူဒါန်း ရခြင်းမှာယခင်ကရေကြီးရေလျှံမှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားချိန်အတွင်းဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားပရဟိတအဖွဲ့များနှင့် အလှူရှင်များအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ၊ လူအား၊ ငွေအားဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်၍ ဝေးလံခေါင်သီသော...
September 20, 2016August 30, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Balikpapan မြို့တွင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖြစ်သည့် TAGANA အဖွဲ့မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် How to prepare for the disaster andHow to handle the disaster သင်တန်းသို့ အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးစိုးတင်မောင်ဇော်က ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ငလျှင်၊ မုန်တိုင်း၊ မီးလောင်မှု၊ ရေကြီးရေလျှံမှု စသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်လာပါက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပုံများကို လက်တွေ့သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
September 19, 2016August 30, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ညနေက မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသ (ချောက်မြို့၏ အနောက်ဘက်(၁၂)မိုင်ခန့် အကွာ)ကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်(ခ်)တာ စကေး (၆.၈) အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ရာ ၎င်းငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီး ခဲ့ရသော ပုဂံမြို့ရှိ ရှေးဟောင်းစေတီများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် အနာဂတ် အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM)မှ အလှူငွေကျပ်သိန်း(၂၀၀၀)ကို ယနေ့ (၂၅.၈ .၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဖောင်ဒေးရှင်းကိုယ်စား ကမ္ဘောဇအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာဦးမိုးဆန်းအောင်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် အထက်မြန်မာပြည်တာဝန်ခံ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးတင်ထွန်းနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ရှိသူများမှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ယခုငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်ပါ ခံစားခဲ့ရပြီး၊...
August 25, 2016September 2, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM)သည် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(၁၃)ခုသို့ အလှူငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)စီဖြင့် စုစုပေါင်းကျပ် သိန်းပေါင်း(၁၃,၀၀၀)ကို ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM)မှ တာဝန်ရှိသူက ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀၀)ကို မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမင်းမင်းဦးထံသို့ သြဂုတ်လ (၁၉)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်ပေးအပ်လှူဒါန်း ခဲ့သည်။ အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM)သည် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ စုစုပေါင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်(၁၃)ခု၏ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်များထံသို့ ဖောင်ဒေးရှင်း တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သိန်း(၁၀၀၀)စီကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ယခင်က ရေကြီးရေလျှံမှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားချိန်အတွင်းဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားပရဟိတအဖွဲ့များနှင့် အလှူရှင်များအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊...
August 19, 2016September 2, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့တွင် BFM မှ ထမင်းဘူးများလှူဒါန်းး ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေသည့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့တွင် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း BFM မှ (၁၅.၈.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ထမင်းဘူးများ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ပုသိမ်မြို့ရှိ ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေသောရပ်ကွက်များနှင့် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ (၁၀၀၀) ကျော်အတွက် ထမင်းဘူးများကိုလည်းကောင်း၊ အလှူရှင် ရောက်ရှိမှုနည်းသည့် မြို့စွန် အနိမ့်ပိုင်းရှိ ရပ်ကွက်များမှ ရေဘေးရှောင် ဘုန်းကြီးကျောင်း (၇) ကျောင်းအားလည်းကောင်း နံနက်စာနှင့် ညနေစာထမင်းဘူးများကို ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲ(၁)နှင့်(၂)မှဝန်ထမ်းများစုပေါင်း၍ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
August 16, 2016September 2, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM) မှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၁၂) ခုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း (၁၂,၀၀၀) လှူဒါန်းထား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM) သည် ၂၀၁၆-ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(၁၂)ခုသို့ အလှူငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)စီဖြင့် စုစုပေါင်းကျပ် သိန်းပေါင်း(၁၂,၀၀၀) ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသအတွင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း(BFM) ကိုယ်စား တာဝန်ရှိသူ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၊ ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ၊ ဒုတိယမန်နေဂျာ ဒေါ်ဖြူမာအောင် က ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀) ကို တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ထံသို့ သြဂုတ်လ ၁၅-ရက် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM) သည်...
August 15, 2016September 2, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ ပန်းယျကျေးရွာတွင် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်၌ တပ်ဆင်ထားသော ဆိုလာပြားမှ ဝါယာရှော့ဖြစ်ကာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ မီးဘေးသင့်ခဲ့သည့် အိမ်ထောင်စု (၂၁) စု၊ လူဦးရေ (၁၀၀)ကျော် အတွက် အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM) မှတာဝန်ရှိသူ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၊ အထက်မြန်မာပြည်တာဝန်ခံ ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးတင်ထွန်းက အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် ဆန် ၁ အိတ်၊ ဆီ ၁ ပုံး၊ ငွေကျပ် ၅ သိန်းကို အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း ၂၁ စု အတွက် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက် (ယနေ့) သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
July 27, 2016September 2, 2019 In Disaster Relief and Recovery, News